Safaarada Mareykanka Nairobi oo soo saartey digniin weeraro aragagixiso oo laga.. – SBC
Safaarada Mareykanka Nairobi oo soo saartey digniin weeraro aragagixiso oo laga..
Safaarada Mareykanku uu ku leeyahay dalka Kenya ayaa soo saartey digniin ay ku sheegayso in weeraro argagaxiso oo laga gaysto magaalada Nairobi, iyadoo digniintaasi u jeedisay muwaadiniinta Mareykanka ee degan ama booqanaya Kenya inay muujiyaan feejignaan dheeri ah.
“Waxaa lagu wargalinayaa dhamaan muwaadiniinta Mareykanka ee degan Kenya ama booqanaya in safaaradu heshay warar la isku haleyn karo oo muujinaya in weeraro aragagixiso oo lagu beegsanayo goobaha caanka ah ee Kenya & waliba goobaha ay isagu yimaadaan dadka ajaaniibta ah sida goobaha laga dukaameysto (malls) iyo kalaabyada habeenkii (night Clubs) ayaa lagu yiri fariin deg deg ah oo ay soo saartey safaarada Mareykanka ee magaalada Nairobi.
Sidoo kale safaaradu waxay sheegtey in la qaadi doono sidii loo xadidi lahaa masuuliyiinta dawlada Mareykanka iyo shacabkeeda qorsheynaya inay booqasho ku tagaan dalka Kenya.
Warkan ka soo baxay safaarada Mareykanka ee magaalada Nairobi oo la shaaciyey saacado ka hor ayaa waxaa lagu tilmaamay in ay ka dambeysay ka dib markii ciidamada Kenya gudaha u galeen Soomaaliya iyagoo doonaya inay beegsadaan kooxo looga shakisan yahay inay ka mid yihiin Al-Shabaab.
Xarakada Al-Shabaab ayaa hanjabaad cusub oo ay soo saareen waxay uga digeen Kenya inay la kulmi doonto jawaab deg deg ah oo la xiriirta ciidamada ay u dirtey Soomaaliya, isla markaana waxay ku bixiyeen digniin inay Kenya gali doonaan hadii aanay ciidamadeeda deg deg ugala bixin dhulka Soomaaliyeed oo aanay joojin ku xadgudubka qaranimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya.
Bilhii la soo dhaafay gudaha dalka Kenya gaar ahaan xuduuda Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxaa laga geystey afduubyo lagula kacay dalxiisayaal iyo shaqaale samafal.
11-kii September 11 koox hubaysan ayaa galay goob dalxiis oo ku taal xeebta Kenyakuwaasi oo diley David Tebbutt oo ahaa nin 50 sano jir ah oo u dhashay dalka Britain iyagoo afduub u kaxaystey xaaskiisii Judith.
1-dii bishan October kooxo la aaminsan yahay inay yihiin burcad badeed Soomaali ah ayaa ka qafaashay jasiirada loo dalxiiska tago ee Manda ee dalka Kenya haweenay ku jirtey sano lixdan, haweenaydaasi ayaa sida ay sheegtey wasaarada arimaha dibada Faransiiska waxay u geeriyootey ka dib markii kooxda qafaalatey ay u diideen dawo ay kula tacaalaysay cudurka kansarka oo ay mudo la tiicaysay.
Sidoo kale horaantii bishan kooxo hubaysan ayaa ka qafaashay xerada qaxootiga ee Dhadhaab laba qof oo shaqaale samafal ah oo u dhashay wadanka Spain kuwaasi oo ka mid ahaa hay’adda MSF.
Kooxda Al-Shabaab oo lagu tuhmayey falalkaasi waxay beenisey inay wax lug ah ku leedahay afduubyadaasi.